I-SEO yeHlabathi yeZona ndlela ziBalaseleyo
Ukuphucula umxholo wakho ngaphakathi
NgoMvulo, nge-24 kaJanuwari, 2011 NgoLwesihlanu, Matshi 1, 2013 Douglas Karr
Usenokungakhathazeki nokuba abaphulaphuli bakho baMazwe ngaMazwe okwangoku, kodwa isenokuba yinto onokufuna ukuyijonga ngokusondeleyo. Ukukhula kwamazwe aphesheya kwiwebhu kuyenyuka kwaye kunokuba sisixhobo esimnandi kwinkampani yakho ukwandisa ishishini. Abathengi bethu abathathu bathengisa kumazwe aphesheya kwaye besisebenza ukufumanisa ezona ndlela zilungileyo zokukhangela kwiinjini yokukhangela. Nazi ezinye iziphumo:
gShiftLabs sisixhobo sokubeka iliso kwi-SEO ngaphakathi nakwamanye amazwe.
Kwimeko efanelekileyo, ukubeka kwinqanaba elifanelekileyo kwilizwe elithile kuya kufuneka ubonakalise ii-ccTLDs ngelizwe (.co.uk, .fr, .de, njl. Njl.) Ezibanjwa kwilizwe lokuzalwa. Ukuba ayisiyiyo inketho, sebenzisa ii-subdomains kulwimi ngalunye, njenge-se.domain.com, de.domain.com njl.
Cwangcisa iiakhawunti ezininzi ze-Webmaster Tools ze-ccTLD nganye okanye i-subdomain.
Qinisekisa ukubonisa ulwimi kwicandelo.
Tsala amakhonkco kweli lizwe lithile.
Ingcebiso zikaGoogle ku ukubamba ngaphakathi elizweni. I-DNS yamanye amazwe inokunceda ukuba awukwazi ukubamba kumazwe aphesheya.
Ukuba uneofisi yelinye ilizwe, qiniseka ukuyibeka kwiofisi efanelekileyo.
Sukuxhomekeka kuguqulelo oluzenzekelayo. Ukuba unqwenela ukufikelela kubaphulaphuli bamanye amazwe, qesha amazwi aphesheya ukuba uguqule umxholo wakho.
tags: UkuThengiswa kweMpahlangamazweuphendlo lwamanye amazweseo ngamazweenjini yokukhangela noun
Hlanganisa i-WordPress kunye neBlog Talk Radio